Mpihira am-polony maro, kalaza avy amin’ny faritra manerana ny nosy, ary mpihira iray nafarana manokana avy any Canada no hampifaly ny Malagasy mandritra ireo andro hitsenana ny fankalazana ny fitsengerenan’ny fiverenan’ny fahaleovan-tenam-pirenena.
Hiavaka mitaha amin’ireo Podium rehetra nisy hatramin’izay ny Podium atolotry ny fiadidiana ny repoblika ho an’ny Malagasy hitsenana ny fetin’ny fahaleovan-tena amin’ity taona 2019 ity. Zava-kanto ho an’ny sokajin-taona maro. Seho an-tsehatra, dihy. Hampiray ny vahoaka an’Antananarivo, hiaram-paly , hanamafy orina ny firaisan-tsaina, ny fifankatiavana sy ny firaisan-kiana. Toy izao entin’ny Coach fidy izao ny fandaharam-potoana manomboka ny faha 24 ka hatramin’ny faha 25 ny volana jona.
Zoma 21 Jona (Rock)
Sabotsy 22 Jona (Tropical)
Alahady 23 Jona (Mahamasina-Hiram-piderana)
TGC sy maro hafa
Alahady 23 Jona (Analakely)
Loic Rak Roots
Sy maro hafa
Alahady 24 Jona (Analakely)
Kaiamba grand complet
Alahady 25 Jona (Analakely)
Arak’izany ho tapaka tanteraka ny lalana eo amin’ny Pavillon miditra amin’ny lalana mihazo ny Avenue de l’indépendance sy ny lalana eo anolaon’ny Glacier manomboka ny zoma ho avy izao amin’ny efatr’ora sy sasany ka hatramin’ny valo ora sy sasany alina. Hisy kosa ny fandaminana vaovao, ho apetraka, toa ny fanaovana “Double” sense ny lalana mihazo an’Andohananalakely avy amin’ny SICAM sy any ambadikin’ny Pavillon.